Kanzuru yeHarare Yoisa Mamita eMvura eTanga Wabhadhara
Kubvumbi 04, 2011
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine hurongwa hwekuti vanhu vagare vakabhadhara mari dzemvura vasati vashandisa mvura iyi. Chirongwa ichi chichatangwa muvanhu vanogara kumaavhenyu mudzimba dzinosvika chiuru.
Gurukota rezvemvura, Va Samuel Sipepa Nkomo, vanoti hurumende yakawana mari inoita US$144m kubva ku China Export and Import Bank. Imwe yemari iyi ndiyo ichashandiswa mukutenga mamita emvura achange achishandiswa. Hurongwa uhu hunoitwa zvichitevera kusawirirana kwanga kuripo pakati pevagari vemuHarare nekanzuru yeguta iri.
Sangano reHarare Residents Trust ragara richinyunyuta pamusoro pekubhadhariswa kuri kuitwa vanhu mvura yavanenge vasina kushandisa. Vagari vazhinji vanga vachiramba kubhadhara mari dzemvura, izvo zvakapa kuti kanzuru ivhare mvura kunzvimbo dzakaita seKuwadzana Extension neCranborne.
Hurukuro naVaSam Sipepa Nkomo